Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo Dalka suudaan uga qeybgalaya Xuska 57 guuradii ka soo wareegatay xornimadii dalkaas | Somalisan.com Home
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo Dalka suudaan uga qeybgalaya Xuska 57 guuradii ka soo wareegatay xornimadii dalkaas 1/1/2013 5:06:00 PM
Madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa sidoo kale u qorsheysan inay ka qeybgalaan mashruuc biyo xireen ah oo ay dowlada Suudaan ka hirgelisey gobolka Blue Nile.
Madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya Dr.Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u jooga magaalada qartuum ee caasimada dalka Sudan sidii uu uga qeybgeli lahaa xuska 57 guuradii ka soo wareegatay markii dalkaasi xornimadiisa ka qaatay gumeystihii reer Yurub. Madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa sidoo kale u qorsheysan inay ka qeybgalaan mashruuc biyo xireen ah oo ay dowlada Suudaan ka hirgelisey gobolka Blue Nile.
Sidoo kale madaxweynaha ayaa lagu wadaa intuu suudana joogo inuu la shiro madaxweynaha dalkaasi cumar Xasan Albashiir iyagoo ka wada sheekeysan doona xiriirka labada dal oo iskula jira dalalka islaamka,afrikaanka iyo Ururka Midowga Afrika.
Safarka madaxweynaha uu ku tagay sudan ayaa ka dhigeysa tii ugu horeysay tan iyo markii loo doortay xilka madaxweynaha soomaaliya waana dalkii 5aad oo uu tago tan iyo markii la doortay 10-kii september ee sanadkii tagay loo doortay xilka ugu sareeya dalka.
Si kastaba lama yaqaan Madaxweynaha inuu toos dalka ugu soo laaban doono marka uu dhameystay joogitaankiisa dalka Sudan ama inuu dalal kale soo mari doono.